Hevitra MPANOHARIANA | Jolay 2016 |
Tia Tanindrazana ve ity olo-malazan'ny tantara malagasy ity?
2016-07-21 @ 15:48 in Politika
Ity lahatsoratra ity dia eritreritro manokana momba ny hoe fitiavan-tanindrazana ka raisiko ho raharaha manokana Ralaimongo. Misy zavatra tsy azoko tsara manko ny amin'ny antony nampidirana azy ho tia tanindrazana nefa tsy reko loatra ho niady ho amin'ny fahaleovantenan'i Madagasikara izy. Ny notakiany dia ny hanaovana ny teratany Malagasy rehetra hizaka ny zom-pirenena Frantsay, mba hitovian'ny Frantsay sy ny Malagasy eo anatrehan'ny lalàna sy ny fitsarana amin'ny zo rehetra.
Fony aho namaky ny tantara dia karazam-panesoana ny Frantsay mpanjana-tany na mpiasam-panjakana miseho ho manambany Malagasy no tena fanaony, vasohany hitam-bahoaka ireo mpiasam-panjakana manindry fiteny any amin'ireny biraom-panjakana ireny. Ny tena nahatonga saina aho tampoka dia ny anaran'ny fikambanana nisy azy ho Ligy Ho amin'ny Fizakan'ny Malagasy ny Zom-pirenena Frantsay. Endrika fitiavan-tanindrazana tamin'izany fotoana izany tokoa ve no notakiany?
Inona no nampidirana azy ho ao anatin'ny Tantaram-pirenena ho Maherifo? Noho izy nitaky ny fitovian-jò ve fa tsy ny fahaleovantena? Raha tontosa tamin'ny andron'ny Krizy lehibe tokoa (1929-->)ary ny fitakiany ka nizaka ny zom-pirenena Frantsay ny Teratany Malagasy rehetra, moa ve nisy intsony ny fitakian'ny fikambanana hafa nolazaina ho tia tanindrazana? Ka sao dia maherifon'ny fitovian-jò no toerana misy an-dRalaimongo fa tsy maherifon'ny firenena malagasy?
Fa iza no tena nampiditra azy ho ao anatin'ny Tantara noho izany?